♨ . Qu Te Kitchen: ဒိန်ဂျမ်းကျီးဂဲ ( ပဲငပိဟင်းချို)
မင်္ဂလာပါရှင် ခုတလော ချက်ဖြစ်နေတဲ့ ဟင်းတွေက အရွက်သုတ် ပြုတ်တွေပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက် အရည်သောက်ဟင်း ဖြစ်တဲ့ ပဲငပိဟင်းချိုလေး ချက်စားကြရအောင်လား ရှမ်းမလေးများအကြိုက်ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ် အစားအစာနဲ့ ပက်သက်လာရင် Qt ဂျီးမများတက်ဖူး အကုန်စားတယ် အသီးဆို လက်သီး မီးသီး နဲ့ ပဒိုင်းသီး လောက်ပဲရှောင်တယ် အသားထဲမှာ မစားတာ ဆိုလို့ သစ်သားတမျိုးပဲရှိတယ် :D :D ဒီနေ့ချက်တဲ့ ပဲငပိဟင်းချိုကို ၀က်သားမီးကင်ဆိုင်တွေမှာ ထမင်းကြော်နှင့်တွဲစားရန် ချပေးလေ့ရှိပါတယ် မိသားစုထမင်းဝိုင်းတွေမှာလဲ များသောအားဖြင့် အလွယ်တကူ ချက်ပြုတ်စားသောက်ကြတဲ့ အရည်သောက် ဟင်းတခွက်ဖြစ်ပါတယ် ဟင်းချက်ဖို့အတွက် လိုအပ်တာတွေက ဖရုံသခွား မုန်လာဥနီ ကြက်သွန်နီ ငရုတ်သီးစိမ်း ကြက်ဥ တလုံးနှင့် ပဲပြား အနည်းတို့လိုအပ်ပါတယ် အသီးအနှံတွေကို ပုံမှာပြထားသလိုလေး ထူထူလေး လှီးပါ
ရေနွေးအိုးဆူလာရင် ငါးနီတူးခြောက်လက်တဆုပ်ခန့် နှင့် ပဲငပိအနှစ် ၂ ဇွန်းမောက်မောက်ထည့်ကာ ရေ ၂/၃ ကျအောင် ကျိုပါတယ် အမြှတ်တွေထွက်လာရင် ခပ် ထုတ်ပစ်ပါ .
ရေကျလာပြီဆိုရင် ဖရုံသခွား မုန်လာဥနီ နှင့် ပဲပြားထည့် (ပဲပြားထုပ်ကို အလယ်ကောင်က ဓါး တချက်မွန်းပြီး လက်နဲ့ ညစ်ထည့်လိုက်ရင် ရပါပီ)
၃ မိနစ်လောက် အဖုံးအုပ်ပြီး တည် အပေါ့အငံမြည်း ကိုယ်ချက်တာနည်းနည်းပေါ့နေလို့ ပဲငံပြာရည်အနောက် အနည်းငယ်ထပ်ထည့်လိုက်တယ် ကြက်သွန်နီ ငရုတ်သီးစိမ်း ကြက်ဥ တလုံးဖောက်ထည့်ပါ မီးဖိုပေါ်မှာ ခဏထပ်တည်ပြီး ချခါနီးမှ အရောင်တင်မှုန့်ခပ် အရသာရှိစွာသုံးဆောင်နိုင်ပါပီ
Soju နဲ့ တွဲသောက်လည်းအဆင်ပြေတယ် :P ငါးနီတူးခြောက်သေးသေးလေးတွေလဲ ပွနေပီး ပဲငပိနဲ့ဆိုတော့ ဟင်းရည်သောက်ပါရင် စားလို့သောက်လို့ကောင်းတဲ့ သူများအကြိုက်ဖြစ်မှာပါ ပဲငပိဟင်းချိုက ချက်ရတာ မြန်ပါတယ် ဒါပေမယ့် အရည်ကျအောင် တည်ဖို့ လိုပါတယ် ရေ စော်နံနေရင် စားလို့မကောင်းပါဖူး ကိုယ်တော့ ဒီလို အရည်သောက်မျိုးချက်ရင် တခြားဟင်း ဘာမှသိမ့်မလိုဖူး ထမင်းနဲ့ဖျော်ပြီး သောက် လိုက် တာ ပဲ :)
Mar Mar Lwin2 June 2012 10:53ပဲငပိကြိုက်လွန်းလို့စားလိုက်ပြီနော်ReplyDeleteReplies^V^2 June 2012 11:09စားပါ တီတီမာ ပါဆယ်ပါ ပို့လိုက်မယ် :PDeleteReplyမီးမီးငယ်2 June 2012 11:04ကိုယ်ချက်ရင်တော့ကြက်ဥမထဲ့ပါရှင်။ကျီးဂဲဟင်းတွေတော့ကြိုက်တယ်။ဒီတခွက်ထဲနဲ့ လုံလောက်ပါတယ်။ညအိမ်မက်ထဲမက်ရင် ရှင့်ကိုအပြစ်တင်မှာနော်..ဟွန့် :))ReplyDeleteReplies^V^2 June 2012 11:12ဒယ်ဒီနဲ့ တိုင်ပြောလိုက်မှာပေါ့ အဲ့ယာမှ မာမီ ကိုနေ့တိုင်း ပဲကုလားဟင်းတွေဝယ်ကျွေးမှာ ခိခိ :Pသူများလဲ အဲဒီ့တခွက် ထမင်းတပန်းကန်နဲ့ စားလိုက်တယ် :)DeleteReplyစံပယ်ချို2 June 2012 12:12လွယ်ကူတဲ့ပုံစံလေးမို့ချက်စားကြည့်ဦးမယ် ပဲငပိကလဲကြိုက်ပြီးသားပါတခါမှတော့ မစားဖူးဘူး ကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတယ်ကောင်းမယ်ဆိုတာ(ဟီး)ReplyDeleteReplies^V^2 June 2012 22:25စားလို့ တကယ်ကောင်းပါတယ် မကြီးဂျက် ငါးခြောက်လေးပါလို့ ပိုစားကောင်းတယ် :DDeleteReplyAnonymous2 June 2012 17:10'အစားအစာနဲ့ ပက်သက်လာရင် Qt ဂျီးမများတက်ဖူး အကုန်စားတယ် အသီးဆို လက်သီး မီးသီး နဲ့ ပဒိုင်းသီး လောက်ပဲရှောင်တယ် အသားထဲမှာ မစားတာ ဆိုလို့ သစ်သားတမျိုးပဲရှိတယ်'...သဘောကျလွန်းလို့ သူ့ ကိုဖတ်ပြတာသူကလည်းရယ်လိုက်တာ။ တော်တော်ချစ်စရာကောင်းတာဘဲတဲ့။ ဒါတောင်ရုပ်မမြင်ဘူးသေးလို့ နော်။ကဲ...မုန့် ကျွေးတော့။း))အိုင်အိုရာReplyDeleteReplies^V^2 June 2012 22:31ဟိဟိ .. ညလေးတို့ ကျောင်းတုန်းက ဒီထက် ဆိုးတယ် မမ ရဲ့ .. ခုဆို ညလေး တော်တော်လိမ္မာနေပြီလို့ ပြောလို့ရပီ :D D: မုန့် ကျွေးရမှာလား အဲ့ယာရှို အဲ့စာကြောင်လေးကျော်ဖတ်လိုက်လေ နော် နော် မနက်ဖြန် အသားကင် စားရင် မမအတွက် သီးသန့် ဓာတ်ပုံရိုက်ပီး ပို့လိုက်မယ် :) :)DeleteReplythida2 June 2012 21:02nyi ma Qt, here don't have soya bean pase.What can I use instead of soya bean pase?pls tell me.soup is very good and thanks for sharing.ReplyDeleteReplies^V^2 June 2012 22:37to thida ပဲငပိက soybean ကိုလုပ်ထားတာပါ soybean ကိုတော့ ၀ယ်ရလွယ်မယ် ထင်ပါတယ် soybean paste (ပါဝင်တဲ့အချိုးအစားတွေပါ)* 400 g whole soybeans* 600 ml water* 150 g salt* 300 g dried rice koji (rice fermented with special moulds, this can be bought are also made at home)ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို youtube လေးနဲ့ပဲ ဥပမာကြည့်လိုက်ပါနော် ဘာမှ မခက်ပါဖူး အဆင်ပြေမှာပါ http://www.youtube.com/watch?v=ZiDdsFvN958&feature=related (or)http://www.youtube.com/watch?v=D9tt5zdLJVA&feature=fvwrelsoybean ပဲအခြောက်ဝယ်လို့မရရင် ပို့ပေးမယ်နော် :)DeleteReplythida3 June 2012 00:14Thanks alot Qt yay, I can buy soy bean .I will try it.Thanks again .I wish you are happy and healthy.ReplyDeleteReplies^V^3 June 2012 12:33me tooooo thanks alot thidaDeleteReplyမြတ်ကြည်3 June 2012 04:23မြတ်ကြည် အမေ ဒီလာလည်တုန်းက ကြိုက်လို့တဲ့ တစ်ရက်တည်းကို ၂ခါပြန်စားတယ်။ :DReplyDeleteReplies^V^3 June 2012 12:34ဟုတ်လား မြတ်ကြည်မာမီ က ပဲငပိကြိုက်လို့ အကြိုက်တွေ့သွားတာဖြစ်မယ် မြတ်ကြည်လေးရော မကြိုက်ဖူးလား :DDeleteReplysan htun3 June 2012 08:57ချက်စားဦးမှာ..စကားမစပ် ဘလော့ဒီဇိုင်းလေးက လှတယ်..ReplyDeleteReplies^V^3 June 2012 12:36ချက်မစားပါနဲ့ စန်းထွန်းရယ် ဘလော့ဒီဇိုင်းလေးလှတယ်ဆိုလို့ Qt ချက်ကျွေးချင်လို့ပါ :D :D ကိုယ် ဘာမှ မလုပ်တက်ဖူးလေမတက်တခေါက်လေး ကလိထားတဲ့ baby IQ လေးတွေပါ :)DeleteReplyAdd commentLoad more...
Jung-Il Oriental Food and Gift
Si Thu Win, Kaung Myat San and Ael Mhenn @ Paradise magazine
27th SEA Games: Opening Ceremony ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအစအဆုံး(ရုပ်/သံ)
၂၇ ကြိမ်မြောက် SEA Games ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ဖျော်ဖြေမှုမြင်ကွင်းများ